फूलगोभी केक | बेजिया
मारिया vazquez | 01/06/2021 10:00 | अद्यावधिक गरियो 29/05/2021 22:53 | सलाद र तरकारीहरू
को योताम ओटोलेन्गी कुकबुकहरू जब तिनीहरू प्रेरणा खोज्न आउँछन् उनीहरू मेरो मनपर्दो हुन्। त्यहाँ केहि समयहरू छन् जुन म उनीहरूको व्यञ्जनहरू पत्रमा पालना गर्दछु, तर धेरै पटक म तिनीहरूलाई अनुकूलन गर्दछ सरल संस्करणहरू सिर्जना गर्नका लागि वा केवल मेरो पेन्ट्रीमा मिल्छ। यो फूलगोभी केक त्यस्तो उदाहरण हो।
El केक फूलगोभी आँखाबाट प्रवेश गर्दछ। यो एक धेरै सरल केक बनाउनका लागि र खाजा र दुबै खानाको लागि दुबै सेवा गर्न उत्तम छ, सँग ए हरियो सलाद। तपाईं यसलाई अग्रिम तयारी पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई न्यानो वा चिसो प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईंको रुचिमा!
किताबको संस्करणले मैले प्रयोग गरेको रकम डबल गर्दछ,-इन्च प्यानको लागि एकदम सही र चार उदार सर्विंग। साथै, मूल रेसिपीले केहि सामग्रीहरू समाहित गर्दछ जुन मैले अन्यको लागि प्रतिस्थापित गरेको छु वा हटाएको छु। अझै परिणाम १० छ। यो परीक्षण गर्नुहोस्!
1 सामग्री (१ cm सेमी मोल्डको लागि)
सामग्री (१ cm सेमी मोल्डको लागि)
260२० g फूलगोभी
२ स्तर चम्चा अतिरिक्त कुमारी अलिभ तेल
१/२ चम्मच काटिएको रोसमेरी
२ ठूला अण्डा
२ g० g गहुँको पीठो
बेकिंग पाउडरको १/२ चम्मच
ग्रेटेड परमेसन चीजको g० ग्राम
कालो मिर्च स्वाद गर्न
मोल्ड ग्रीस गर्न बटर
२ चम्मच सेतो तिल
ओभन १ Pre० डिग्री सेन्टिग्रेडमा गरम गर्नुहोस्, माथि र तल तातो संग।
फूलगोभी सफा गर्नुहोस् र भागमा अलग गर्नुहोस्। तातोको लागि पानी र केही नुनको साथ सासप्यान राख्नुहोस् र, जब यो उमालिन्छ, फूलगोभीलाई १ minutes मिनेट सम्म पकाउनुहोस्। त्यसपछि सबै पानी र ड्राई छोड्नुहोस् यो एक strainer मा छोड्नुहोस्।
फूलगोभीले पकाउँदा चार प्याजको घण्टी काट्नुहोस् केक सजाउन र बाँकी एकदम सानो टुक्रा मा काट्नुहोस्, ताकि तिनीहरू केकमा देख्न सकून्।
जैतुनको तेल तताएर मध्यम आँचमा स्केलटमा र प्याज पच करीव १० मिनेट को लागी। त्यसो भए, रोमामेरी थप्नुहोस्, दुई थप मिनेट पकाउनुहोस् र तापको तापले छोड्नुहोस्।
यो तापक्रम हुँदा, एउटा कचौरामा सुख्खा सामग्री मिश्रण: पीठो, हल्दी, शाही खमीर, नुन र मरिच।
पछि एउटा कचौरामा अण्डाहरूलाई हराउनुहोस्। एक पटक कुटे पछि प्याज, सुख्खा सामग्री, र चीज जोड्नुहोस् र राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस्।
अन्ततः, फूलगोभीका टुक्राहरू थप्नुहोस्।
15 सेमी हटाउन योग्य मोल्ड तैयार गर्नुहोस्। यसको आधार चर्मपत्र कागजको साथ रेखा र भित्ताहरूलाई ग्रीसको साथ ग्रीस गर्नुहोस्। त्यसो भए तिलको दाना छर्कनुहोस् मोल्डको भित्ताबाट।
मिश्रण मोल्डमा हाल्नुहोस् अब यो तयार छ र आरक्षित प्याजको घण्टीहरूसँग गार्निश गर्नुहोस्।
ओभनमा लिनुहोस् र minutes 45 मिनेट को लागी खाना बनाउनुहोस् वा सेट नभएसम्म त्यसपछि यसलाई ओभनबाट बाहिर निकाल्नुहोस्, यसलाई पाँच मिनेट आराम गरेर अनमोल गर्नुहोस्।
फूलको बत्तीको केकलाई सलादको साथ सेवा गर्नुहोस् र रमाउनुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » व्यंजनहरु » सलाद र तरकारीहरू » केक फूलगोभी
तपाईंको स्नैक्स बोक्नको लागि4दिगो विकल्पहरू
सजावटी गल्तीहरू हामी प्राय: गर्छौं